ဖေါ်ပြချက်:အန်းဒရွိုက်က Universal မော်တော်ကား DVD,9.7 ''2ဒင်က Universal Autoradio,မျက်နှာပြင်က Android က Universal ကားစတီရီယိုအားတို့ထိပါ
Home > ထုတ်ကုန်များ > Universal Android Car Dvd > တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ရေဒီယို 2din တက်စလာဟာ android
9.7 လက်မ2din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player စတီရီယိုရေဒီယိုနှင့်အတူတက်စလာအန်းဒရွိုက်ကားကိုဒီဗီဒီ
1.KLYDE အီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd ဖွံ့ဖြိုးဆဲအထူးပြုတဲ့ professional အဆင့်မြင့်နည်းပညာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်,
အန်းဒရွိုက်ကားကို DVD ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ရောင်း။ ကျနော်တို့ဟာ android စနစ်၏အစောဆုံးဖှံ့ဖွိုးတိုးတတွေဟာ
နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဟာ android အရှိဆုံးတည်ငြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန် 8-core / 8.0 8 64 နှင့်အတူဟာ android ကားတစ်စီး DVD ဖြစ်ပါသည်
GB ကို, DSP, TPMS, DAB, ကြက်တူရွေး BT, etc ။ ကျနော်တို့ကအမြဲရန်ထုတ်ကုန်တိုးတက်အောင် & ဖွံ့ဖြိုးဆဲစောင့်ရှောက်
client`s လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ ကျနော်တို့အများကြီးလေးစားခံရသောတွေနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံရေးကိုထူထောင်ခဲ့ကြ
စသည်တို့ကိုဂျပန်, ဥရောပ, တောင်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့တောင်အာရှကနေ clients များ။
2. တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player din Tesla2အဘို့ဤဟာ android ကားတစ်စီး DVD ကို၏သတ်မှတ်ချက်များ
3. တက်စလာ2din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player sensitivity ကို setting ကိုမြင့်မားသည်, အသံလက်ခံရရှိမည်, စားပွဲပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး, ဒါပေမဲ့ sensitivity ကိုနိမ့်သည်မှန်လျှင်, အလိုအလျောက်ထွက် filter နိုငျရရှိခဲ့ FM ရေဒီယိုသာမန်လျှင်မူကား, ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူး။ ရေဒီယိုမှာလည်း TPMS, OBD2, DAB, DSP, DVR, နောက်ကင်မရာ, ကြက်တူရွေး BT စသည်တို့ကိုပံ့ပိုးကူညီ
တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD ကို din တက်စလာ2ရုပ်ပုံများ:
Skype ကို: szklyde7
ဖုန်းနံပါတ် / WeChat: 13750403489
တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player ရေဒီယို 2din တက်စလာဟာ android အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဒေါင်လိုက်မျက်နှာပြင်ကားတစ်စီး DVD universla အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
10.1 လက်မ2din တစ်လောကလုံးကားတစ်စီး DVD player အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
အန်းဒရွိုက်က Universal မော်တော်ကား DVD 9.7 ''2ဒင်က Universal Autoradio မျက်နှာပြင်က Android က Universal ကားစတီရီယိုအားတို့ထိပါ အန်းဒရွိုက် 8.1 က Universal မော်တော်ကား DVD Klyde အန်းဒရွိုက်က Universal မော်တော်ကား DVD REGAL အန်းဒရွိုက် 8 မော်တော်ကား DVD အန်းဒရွိုက် Deckless မော်တော်ကား DVD ကို sonata အန်းဒရွိုက် 8 မော်တော်ကား DVD player